Vacuum Nzvimbo, Ruva Vacuum Nzvimbo, Foods Vacuum Nzvimbo - ALLCOLD
ZVAKAITIKA & YEMAHARA HWEMAHARA MABASA
ALLCOLD ndiwo epasirese mutungamiri vhoriyamu mukutonhodza mhinduro & Kugadzira yekutsvaira inotonhorera
ALLCOLD ibhizimusi repamusoro-soro rinozvipira kuR & D uye rine 10,000m2 nzvimbo muDongguan China
DZIDZISO DZINONYANYA KUKOSHA
Inokurumidza kutonhora kumhanya, Izvo zvinongotora kutenderera maminetsi makumi matatu kutonhorera kubva ku100 ℃ kudzika kupfuura 10 ℃. Yunifomu inotonhora tembiricha iri pakati uye pamusoro pechikafu. Hapana chakakosha chinodiwa pahukuru, chitarisiko uye stack modhi yezvigadzirwa HAPANA "yechipiri kusvibiswa" kwekutonhora mune yakazara-yakasarudzika isina simbi kamuri. Kurumidza kuyambuka tembiricha renji ye25-50 ℃ inoenderana chaizvo nerudzi rwehutachiona. AllCOLD yekuzorora inotonhorera ikozvino inoshandiswa zvakanyanya mukutonhora kwe ...
Steamed Foods Vacuum Nzvimbo
Vacuum Inotonhorera Models & Magadzirirwo: Vacuum Inotonhora Main Feature 1.Fast kutonhora kumhanya. Chikafu chakabikwa chakatonhora kusvika ku10 - chinongoda 20-30, chikafu chakabikwa chakatonhora kusvika ku20 ℃ mukati me10-20min. 2.Yunifomu yekutonhora.Pasi pemamiriro ekunze, chikafu chakatonhora kubva pakati kusvika kumusoro. 3.Two-danho kutonhora kudzikisa chikafu kurasikirwa nemvura. Kubva pakakwirira tembiricha kusvika 60 ℃, chikafu chinenge chakurumidza kutonhodzwa kudzivirira mabhakitiriya kukura nekukurumidza, chechipiri chekuchengetedza chinononoka kutonhora kudzikisa kurasikirwa kwemhepo, uye kugadzirisa kunhuvira kwechikafu. 4.M ...
Bakery inofefetedza inotonhorera
ALLCOLD Kubvisa Kutonhorera Makomborero? 1.Ultra-Inokurumidza kutonhora nzira yakatenderedza 20mins / kutenderera. 2.Kureba pasherufu-hupenyu ne 2-3times. 3.Energy kuchengetedza kupfuura 40%. 4.Minimum kuparara kwezvibereko. Nei uchishandisa Vacuum Kutonhora? Kamwe kukohwewa, ese matsva anopinda mukushushikana. Kushushikana uku kunoguma nekufema (kufema) uye kufema (kudikitira) izvo zvinonyanya kukonzerwa nekupisa. Yako miriwo & miriwo zvese kufema & kufema kunogona kuderedzwa zvakanyanya neyedu yekutsvaira inotonhorera ne75% kana kupfuura. O ...
Turfs Vacuum Nzvimbo
Chakanakira Chekubhururuka chinotonhorera (1) Chengetedza hwakanakisa mhando yematafura. (2) Nguva yekutonhora ipfupi, kazhinji ingangoita maminetsi gumi nemashanu. Inokurumidza, yakachena uye hapana kusvibiswa. (3) Inogona kutadzisa kana kuuraya botrytis uye zvipembenene.Kukuvara kudiki pamusoro pemakwenzi uye turfs kunogona 'kupora' kana kusaramba kuchikura. (4) Iyo nyowani yakabviswa inongori chete 2% -3% yehuremu, hapana kuomeswa kwenzvimbo uye deformation (5) Kunyangwe turfs ikakohwewa kunaya, hunyoro huri pamusoro hunogona kubviswa pasi pev ...
Howa Vacuum Nzvimbo
Chidimbu cheVhoriyamu inotonhorera (1) Chengetedza yakanakisa yekunzwa uye mhando (ruvara, kunhuwirira, kuravira uye zvinovaka muviri) hwehowa! (2) Nguva yekutonhora ipfupi, kazhinji ingangoita maminetsi gumi nemashanu. Inokurumidza, yakachena uye hapana kusvibiswa. (3) Inogona kutadzisa kana kuuraya botrytis netumbuyu. (4) Iyo yakabviswa hunyoro inongoita chete 2% -3% yehuremu, hapana kuomesa kwenzvimbo uye deformation (5) Iyo tembiricha yepakati neyepamusoro zvakaenzana. (6) Nekuda kwekutanga-kutonhora, iyo howa inogona kuchengeta yakareba kuchengetera. Sei isu kushandisa Vacuum c ...
Mishonga Inochenesa Nzvimbo
Chakanakira Chizoro chinotonhorera (1) Chengetedza akanakisa mhando emakwenzi. (2) Nguva yekutonhora ipfupi, kazhinji ingangoita maminetsi gumi nemashanu. Inokurumidza, yakachena uye hapana kusvibiswa. (3) Inogona kutadzisa kana kuuraya botrytis uye zvipembenene.Kukuvara kudiki pamusoro pemakwenzi kunogona 'kupora' kana kusaramba kuchikura. (4) Unyoro hwakabviswa hunongoita 2% -3% chete yehuremu, hapana kuomeswa kwenzvimbo uye deformation (5) Kunyangwe kana miriwo ikakohwewa kunaya, hunyoro huri pamusoro hunogona kubviswa pasi pevhu. (6) Du ...